Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- भारतमा १२८ जनालाई पद्मश्री पुरस्कार घोषणा
भारतमा १२८ जनालाई पद्मश्री पुरस्कार घोषणा
नयाँदिल्ली, १२ माघ । भारतको ७३ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा केन्द्र सरकारले पद्म पुरस्कारको घोषणा गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षजस्तै यसवर्षको पद्मश्री पुरस्कारको सूचीमा पनि फरक–फरक क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिँदै आइरहेका १२८ व्यक्तित्वहरु समावेश छन् ।
भारतका चर्चित गायिका सन्ध्या मुखर्जी उर्फ सन्ध्या मुखोपाध्यायलाई पुरस्कारको घोषणा गरियो । यद्यपि, गायिका मुखर्जीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छन् ।
सम्मानका लागि उनको स्वीकृति लिन केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूले उनलाई फोनमा सम्पर्क गरेका थिए । तर, उनकी छोरी सौमा सेनगुप्ताले आमाले यो अवार्ड अस्वीकार गरेको फोनमार्फत सरकारी अधिकारीलाई जानकारी दिएकी हुन् ।
कैयौं प्रशंसकले गायिकाको यो निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । उनलाई ‘बंग विभूषण’ जस्ता थुप्रै प्रतिष्ठित सम्मानहरुबाट सम्मानित गरिसकिएको छ ।
गायक तथा म्युजिक निर्देशक सोनु निगमको नाम पनि सूचीमा समावेश छ । पछिल्लो तीन दशकदेखिको आफ्नो गायन करिअरमा सोनुले हिन्दीलगायत विभिन्न भाषाका ५ हजार भन्दा धेरै गीतमा आवाज दिएका छन् ।
चलचित्रलगायत थुप्रै एल्बमका लागि गाएका सोनुले चलचित्र ‘कल हो ना हो’को टाइटल ट्रयाकका लागि ‘राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार’ पाएका थिए । यसका साथै सोनुले थुप्रै अवार्ड पाइसकेका छन् ।
१२८ मा पर्न सफल अर्को नाम हो, चन्द्रप्रकाश द्धिवेदी । राष्ट्रिय अवार्ड विजेता निर्देशक द्धिवेदीले मोहल्ला अस्सी, पिजर, जेड प्लसलगायत अक्षय कुमार अभिनीत पृथ्वीराजलगायत थुप्रै चलचित्र निर्देशन गरेका छन् । उनी ‘चाणक्य’ को भूमिकाका कारण पनि चर्चित छन् ।
डा. राय र मिश्र राजदूतका लागि अनुमोदित
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पोखरामा निर्मित विद्यालय भवन उद्घाटन
मैले शपथ ग्रहण गरेको २४ घण्टाभित्र जनताले परिवर्तनको आाभाष गर्नेछन् : नवनिर्वाचित मेयर राजेशमान
पेट्रोलियमको ‘करदर’ घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ : अध्यक्ष डा. दत्त
महोत्तरीमा तीन÷तीन पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित
सर्लाहीको लालबन्दीमा २३७ किलो गाँजासहित ६ जना पक्राउ
धनुषाका १८ वटै पालिकाका प्रमुखहरूले सपथ लिए